Matongerwo eNyika, 14 Nyamavhuvhu 2018
Chipiri 14 Nyamavhuvhu 2018
Nyamavhuvhu 14, 2018
Mauto Anofadza Vanhu muGweru Achifora Zvikuru Vechidiki
Vamwe veruzhinji muGweru vacherechedza zuva reDefence Forces Day vachiona mauto achifora munhandare yeMkoba Stadium asi vamwe vati havawone kukosha kwezuva iri.
Dynamos Inotenga Vatambi Vatsva
Mutungamiri weDembare, VaSolomon Sanyamandwe, vanoti vateveri veDynamos vanofanira kugadziririra kuona Dynamos yakasimba uyezve yakasiyana zvikuru neyaivepo munharaunda yekutanga iyo yaitatarika zvinotyisa.
Zimbabwe Inocherechedza Zuva reMauto Vamwe Vachiti Mauto Ngaasapinde Munyaya dzeMatongerwo eNyika
Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vanoti masoja anofanirwa kurangarirwa nebasa raakaita rekubvisa vaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pachigaro, asi vachiti zvakare mauto haafanirwe kupindira munyaya dzemapato ezvematongerwo enyika.
Vakawanda Votarisira Kuti Hurumende Itsva Ichavandudza Hupfumi
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti zvinotarisira kuti hurumende itsva ichagadzwa zvichitevera sarudzo dzakaitwa musi wa 30 Chikunguru gore rino ichagadzirisa nyaya yehupfumi nekukasika senzira yekurerutsa dambudziko remari riri munyika.
MDC T Inorangarira Magamba Ayo Akafa Achirwira Rusununguko Kubva kuHutongi hweZanu PF
Mutauriri weMDC-T yaVaChamisa, Muzvare Thabitha Khumalo, vanoti vatora zuva iri kurangarirawo magamba avo akafa achirwira rusununguko kubva kuhutongi hwe Zanu PF.
Mhuri dzeVakarwira Rusununguko Dzochema Dzichiti Hurumende Haisi Kudzibatsira
Apo nyika iri kurangarira zuva remagamba, dzimwe mhuri dzakasiyiwa nemagamba aya dzinoti hapana chadziri kuwana kubva kuhurumender kuti dzirarame.
Veruzhinji Voyambirwa Kuti Vakoshese Hutsanana Kuitira Kuti Vasa Batwe neTyphoid
Veruzhinji vari kuyambirwa kuti vakoshese hutsanana uye kuti vaende kuchipatara kana vakaona vachiita manyoka ane ropa sezvo vangange vane chirwere chetyphoid.
VaMnangagwa Vanoti Sarudzo Dzakapera Yava Nguva yeKuvandudza Hupfumi hweNyika
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vati nyika yava kufanira kusendeka parutivi nyaya dzesarudzo yoenderera mberi nekuvandudza hupfumi hwenyika.
Magweta aVaMnangagwa Oronga Kupikisa Magwaro aVaChamisa
Mumwe wemagweta ari kumirira VaMnangagwa uye vari munyori anoona nezvemutemo muZanu PF, VaMunyaradzi Paul Mangwana, vanoti ivo nechikwata chavo chemagweta vaedza kunosvitsa magwaro avo kumunyori wezvematare asi vawana mahofisi ake akavharwa sezvo riri zororo remagamba.
Nyamavhuvhu 12, 2018
MDC Alliance Inoti Yakasvitsa Mapepa Ayo kuConstitutional Court neNguva
Mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance Va Nelson Chamisa VaNkululeko Sibanda vanoti bato ravo rakakwanisa kuendesa mapepa avo kudare reConstitutional Court pachiri nenguva uye kwete zviri kutaurwa mumabepa nhau ehurumende.
Zimbabwe Inoti Yakwanisa kuZadzisa Zvimwe zveZvinoita Kuti Zvirango Zvibviswe
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association, VaVictor Matemadanda vanoti zvinorwadza kuti nyika yeZimbabwe iri kucherechedza zuva remagamba nemusi weMuvhuro yakasungwa nezvirango zveAmerica.